Mayelana NATHI - Morningstar Stone Co., Ltd.
Itshe Lenkanyezi Ekuseni
Ubuhle betshe lemvelo buhlala budedela ubukhazikhazi balo obungapheli nobungoma.
E-Morningstar uzohlala unikezwa inani langempela lamatshe emvelo.
I-Morningstar Stone isungulwe kula matshe egumbi angajwayelekile:
Ukukhathazeka ngomkhakha wamatshe wemvelo
Ikhwalithi yinto yokuqala engeke yonakaliswe
Service ngesikhathi nokunemba
Ukuqamba kuyinjini engapheli kaMorningstar ukuze iqhubeke ikhanya
Kusukela ekukhethweni kwempahla eluhlaza kuye ekulungisweni okulungile nokunembile, Sihlose ukwembulwa kobuhle obungenakuqhathaniswa bohlobo ngalunye lwetshe lemvelo ngomzamo omkhulu wokusebenza ngokubambisana kwethu kanye nemfucuza encane kwezomnotho nangobuhle. Umsebenzi eMorningstar marble ahlangane futhi adale inkampani esebenza ngezindlela eziningi futhi ephelele.
Kusukela emsebenzini omncane kakhulu kuya kuphrojekthi enesifiso esikhulu kunazo zonke, iMorningstar iqondiswe ngokomthetho ukwanelisa ukulindelwa kwezobuchwepheshe, ubuhle kanye nezomnotho kuwo wonke amakhasimende athembele emsebenzini wethu onobuhlakani kodwa osungula izinto ezintsha.
Okwamanje inokuqoqwa okuhle kakhulu kwesipiliyoni sokusebenzela amaphrojekthi aphezulu. Kufunwa izixazululo ezikhethekile ukuze isigaba sokunethezeka sifinyelele kumthelela ovelele ngokwambula ubuhle obukhuni ukuqaphela ematsheni, Lokhu kudinga ithimba lokudala nelisebenza ngokuhlangenwe nakho okukhulu kumaphrojekthi wemabula namatshe emvelo.
Itshe elilodwa stop service